Iza moa i Paul Panda Farnana? - Foundation Afrikhepri
Paul Panda Farnana (ny anarany feno Paul Panda Farnana M'fumu, teraka tao 1888 any Nzemba, akaikikaiky Akondro, maty tao amin'io toerana io ihany 12 Mey 1930) dia agronomista ary tia tanindrazana Kongoley.
Ny anaran'i Paul Panda Farnana dia nanamarika ny tantaran'ny République démocratique de Congo noho ny antony maro: izy no Kongoley voalohany nahavita fianarana ambony tao BelgiqueFrantsa. Izy no ambonin'ireo nasionalista kongoley voalohany nanameloka tamim-pahavitrihana ny fomba fanjanahantany napetraky ny belza. Niantso izy, ohatra, ny fampitomboana ny fampianarana laika ary koa ny fidirana ho an'ny kongoley any amin'ny anjerimanontolo ao amin'ny Metropolis. Niangavy ihany koa izy ny fandraisan'anjaran'ireo mpiray tanindrazana aminy amin'ireo rafitra mpanapa-kevitra ao amin'ny zanatany ary koa ho an'ny fanaingoana ny tanindrazana.
Mpikatroka mavitrika ihany koa izy Pan-Africanism ary niara-niasa Paul Otlet (iray amin'ireo ray amin'ny Internet), Henri La Fontaine (Mpiara-miasa amin'i Otlet sy Loka Nobel momba ny fandriampahalemana mg 1913), WEB DuBoisary Blaise Diagne ho an'ny fikambanan'ny Kongresy Pan-Afrikanina Faharoa, tao amin'ny Palais Mondial, tany Bruxelles tamin'ny volana septambra 1921. Nofongariny ny filamatra iraisam-pirenena sy pasifista izay an'ny Paul Otlet sy Henri La Fontaine.
Te ho mpitondra tenin'ny Kongo Belzika any Bruxelles izy ary nampitombo ireo lahatsoratra tamin'ny gazety tamin'ny androny. Tamin'ny 1919 dia nanangana ny Union Congolaise (Society for Mutual Aid and Moral Development of the Congolese Race) izy, ilay fikambanana tsy mitady tombom-barotra tranainy indrindra natombok'ireo kongoley tamin'ny tany belza. Ny iray amin'ireo tanjon'ity fikambanana ity, izay izy no sekretera jeneraly sy ny filoha hajaina, dia ny hiaro ny zon'ny veterana kongoley an'ny Ny Ady Lehibe I izay izy. Ity fikambanana ity dia nitaky matetika tamin'ny fananganana tsangambato ho an'ny "miaramila tsy fantatra Kongoley ”mba hanamarihana ny trosan'ny Belzika amin'ireo miaramila kongoley izay niady teo ambanin'ny saininy tany Afrika (ankoatry ny hafa Tabora, au Cameroun) ary any Frantsa metropolitanina. Tsangambato ho fanomezam-boninahitra an'ireo mpioko kongoley an'ny Panjakàna dia hatsangana amin'ny farany Schaerbeek, kianja François Riga ary natokana tamin'ny 1970, 40 taona taorian'ny nahafatesan'i Panda.
1888: nahaterahan'i Paul Panda Farnana any Nzemba akaikin'ny Moanda dans Lower Congo.
1900: Tonga tany Belzika ny Panda tamin'ny 25 aprily, niaraka tamin'i lietnà Derscheid, izay nandray anjara tamin'nyBia shipping dans Katanga. Nanomboka fampianarana ambaratonga faharoa tao amin'ny Athénée d'Ixelles izy.
1904: tamin'ny volana oktobra dia nandalo ny fanadinana fidirana tao amin'ny sekolan'ny fambolena sy fiompiana any Vilvoorde izy.
1907: ireo nahazo diplaoma Panda izay manana fanavahana avo indrindra; azony ihany koa ny "mari-pahaizana fahafaha-manao" miaraka amin'ny zavaboary manokana avy amin'ny zavamaniry tropikaly.
1908: dodona ny hamita ny fiofanany, nisoratra anarana ho mpianatra tsy tapaka tao amin'ny Sekoly Ambony momba ny fambolena tropikaly any Panda Nogent-sur-Marne. Amin'ny fiafaran'ny fianarany dia mahazo ny "Certificate of Studies" izy. Ao amin'ny oniversite ara-barotra sy consular an'ny Mons, mampitombo ny fahalalany ny anglisy.
1909: Panda dia nokarakarain'ny Ministeran'ny Colonial ho "Mpanapaka Croplo fahatelo". Rehefa tonga teo Boma ny 21 June izy no voatendry Zaridaina Botanika Eala efa ho Coquilathville, izay ampianarany ihany koa ny taranja teôlôjika.
1911: vita ny fe-potoam-piorenany, hanafoana ny SS Brusselsville, 21 Jona. Tamin'ny nahatongavany tany Belzika dia nahazo ny fanavahana ny "kintan'ny serivisy". Tamin'ny fiverenany tany Kongo tamin'ny Desambra tamin'io taona io ihany, dia voatendry ho talen'ny gara Kalamu, izay hanatanterahany manokana ireo fanangonana spesimen'haberarium izay tazomina ao amin'ny National Botanical Garden of Belzika.
1914: nipoaka ny ady ary nijanona tany Belzika i Panda. Nanatevin-daharana ny "Corps of Volunteer Congolese" izy. Kongoley roa hafa no manao fihetsika mitovy amin'izany: Joseph Adipanga sy Albert Kudjabo. Hosamborin'ny Alemanina izy telo mianadahy. Raha nahavita nitsoaka i Joseph Adipanga, Paul Panda sy Kudjabo Albert kosa dia mbola babo mandra-pahatapitry ny ady. Tamin'ny 6 Desambra 1916 dia tonga tao amin'ny tobin'ny voafonja Soltau any Alemana izy ireo ary nisaraka indray tamin'ny 24 martsa 1917. Tao amin'ny tobin'ny gadra ady dia nanakaiky kokoa ny Riflemena Senegaly ho an'iza no asany amin'ny maha-mpanoratra am-bahoaka azy. Amin'ny alàlan'ity dia mifandray izy Blaise Diagne, Mpikambana solombavambahoaka Sénégal.
1919: navotsotra, niverina tany Belzika i Panda ary nahazo fangatahana fialan-tsasatra araka ny fangatahany. Tamin'ny volana febroary dia nandray anjara tamin'ny Kongresy Pan-Afrika voalohany tany Paris izy, nokarakaraina niaraka tamin'i Blaise Diagne, mpikambana ao amin'ny governemanta frantsay, ary WEB Du Bois, sosiolojiana amerikanina-amerikanina ary lehiben'ny NAACP (National Association for the Advancement an'ny olona miloko). Tamin'ny volana novambra dia nanangana niaraka tamin'ireo mpiray tanindrazana aminy izy (anisan'izany i Joseph Adipanga sy Albert Kudjabo) ny Union Congolaise, "fiarahamonina mitondra fanampiana sy fivoarana ara-pitondran-tena sy ara-tsaina amin'ny hazakazaka kongoley". Napetraka eo ambanin'ny fiarovana avo an'ny Louis Franck, Minisitry ny zanatany liberal aryEmile Vandervelde, Mpitarika sosialista ary minisitry ny fitsarana.
1920: Niditra an-tsehatra teo amin'ny sehatry ny Kongresy Nasionaly Kolonely voalohany i Panda (ny 18 ka hatramin'ny 20 septambra 1920) izay natao tao amin'ny Antenimieran-doholona. Vao mainka tsikaritra kokoa ny fandraisany anjara satria izy irery no kongoley nasaina hiresaka amin'ireo olona mpanjanatany: ny fiangonana sy ny sivily. Nandritra io kaongresy io no nihaonan'ny Panda tamin'i Mompera Stefano Kaoze, izay sekretera an'i Monsignor Roelens, izay solontenan'ny apôstôlikan'i Haut-Congo. Ireo roa lahy izay nanokana fotoana hifankahafantarana dia nifanaja ary i Panda dia naneho ny marimaritra iraisana momba ny fandraisana anjaran'ny kongoley irina amin'ny rafitra mpanapa-kevitra.
1921: ny kongresy pan-afrikanina faharoa dia natao nifandimby tany London sy Bruxelles. Panda dia mipetraka eo amin'ny biraon'ny Kongresy miaraka amin'i Blaise Diagne, WEB Du Bois, Paul Otlet, ary Miss Jessie Fauset. Tamin'ny 11 septambra, Paul Panda dia nanao kaonferansa momba ny “tantaran'ny sivilizasiôna Negro amoron'ny renirano Kongo”. Ankoatr'izay dia nambarany ihany koa ny faniriany ny hisian'ny diplaomaty mainty ao amin'ny komisiona iraisam-pirenena tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny baiko ampiharina amin'ireo fananana alemanina taloha tany Afrika. Araka ny fangatahan'ny mpikambana ao amin'ny Vondron'ny Kongoley, Paul Panda dia nanao dingana niaraka tamin'ny Ministeran'ny zanatany mba hikarakarana fampianarana ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy. Araka izany, misokatra ny fandaharam-pianarana ho an'ny Kongoley ampian'ny manam-pahefana belza any Bruxelles, Charleroi ary Marchienne. Panda tenany ihany dia manome lesona vitsivitsy miaraka amin'ireo mpampianatra notendren'ny tompon'andraikitra. Voampanga ho mpikomy, ny katesizy Simon Kimbangu voaheloka ho faty. Niova ho fanagadrana mandra-pahafatiny ny saziny; nalefa sesitany tany Katanga izy, ary nigadra mandra-pahafatiny tamin'ny 1951. Tamin'ny alàlan'ny minisitra Louis Franck manokana dia niasa i Panda handresy lahatra ny manampahefana mpanjanatany mba tsy hampihatra ny sazy famonoana ho an'ilay olona voaheloka. Kimbangu dia vao mainka voafitaky ny mpanjanatany sasany satria heverin'izy ireo ho mpianatr'i Jesosy izy Marcus Garvey. Fifandonana mahery vaika no nanohitra an'i Paul Panda ho an'ny ekipa fanontana ao amin'ny Avenir Colonial Belge, feon'ny mpanjana-tany mpandala ny nentin-drazana indrindra.
1925: ny "fahaterahan'ny Andrefana indray" dia nametraka olana manokana ho an'ny zavakanto kongoley. Mandray anjara i Panda ary miresaka mifandraika amin'ny fanontaniana momba ny zavakanto ary koa ny hoavin'ny asa tanana ao amin'ny fireneny. Nomelohiny ny fandrobana entana izay nahafahan'i Eoropa nanolotra ny tranombakoka sy ny mpitsara fa ny fanjanahan-tany dia fanimbazimbana "voamarina".
1929: fiverenan'i Panda ho any Kongo; niverina tany amin'ny tanàna nahaterahany izy; nanana sekoly sy trano fiangonana natsangana tao izy, natokana ho an'ny mpiaro azy.
1930: Nodimandry tamin'ny 12 May tao amin'ny tanàna nahaterahany i Paul Panda Farnana tamin'ny faha-41 taonany. Any Bruxelles, ny Vondrona Kongoley dia manao lamesa lehibe ao amin'ny fiangonan'nyAbbey an'ny Cambre.
Ny tarehin'i Paul Panda Farnana: Nationalista, Pan-afrikanista, nanao fahaizana ara-tsaina
4 vaovao avy amin'ny € 10,00
1 ampiasaina amin'ny € 17,90
Vidio € 10,00
Nohavaozina farany tamin'ny 22 aprily 2021 7:38 maraina
Mitandrema amin'ny fluorine sy ny chlorine ao anaty rano
Andriamanitry ny rano - Resadresaka amin'i Ogotemmêli (PDF)
Elizabeth "Bessie" Coleman, mpanamory fiaramanidina vavy mainty voalohany